2021 Oshkosh wuxuu dhaafayaa filashooyinka Qabanqaabiyayaasha EAA iyo Kooxda Bahamas
Bogga ugu weyn » Maqaallada Wararkii Ugu Dambeeyay » Jebinta Wararka Caalamka » Bahamas News Breaking » 2021 Oshkosh wuxuu dhaafayaa filashooyinka Qabanqaabiyayaasha EAA iyo Kooxda Bahamas
Airlines • Airport • Aviation • Bahamas News Breaking • Jebinta Wararka Caalamka • Safarka Ganacsiga • Caribbean • Wararka Dowladda • Warshadaha Warshadaha • Shirarka • News • Dalxiiska • Cusbooneysiinta Socdaalka Safarka • Wararka kala duwan
VIP Helicopter Tour - Hawl -wadeennada EAA waxay bixiyeen Bahamas Wasaaradda Dalxiiska & Hawl -wadeennada Duullimaadyada Helicopter -ka ee EAA AirVenture Oshkosh. LR: Reginald Saunders, Xoghayaha Joogtada ah iyo Ellison “Tommy” Thompson, Ku -xigeenka Agaasimaha Guud. Lahaanshaha sawirka BMOTA.
Ururka Cilmi -baarista Diyaaradaha ee 2021 AirVenture Oshkosh, oo lagu qabtay July 26 illaa Ogosto 1, oo ku yaal Oshkosh, Wisconsin, ayaa dhammaaday. Xisaabaadka oo dhan, dadka xiiseeya duulista hawada, oo tirooyin jabiyay, ayaa ku heshiiyay dulucda, “Sugitaankii waa dhammaaday.” “Bandhigu wuxuu ka gudbay filashooyinkii qabanqaabiyeyaasha EAA iyo kooxaha Wasaaradda Dalxiiska & Duulista Hawada ee Bahamas (BMOTA), in kasta oo uu ahaa sannad adag oo aan caadi ahayn,” ayuu yiri Greg Rolle, Sr. Director of Vertical Markets, BMOTA.
Qabanqaabiyeyaasha ma aysan ogeyn waxa laga filan karo munaasabadda, laakiin bulshada duulista ayaa si weyn u hadashay - waxay diyaar u tahay inay timaado Oshkosh.
Mawduuca dhacdada ee “Sugitaanku waa dhammaaday” ayaa la caddeeyay in si wanaagsan loo doortay maadaama runtii ay mudan tahay sugitaanku.
Farxad iyo xamaasad ayaa ku baahday dhulka oo dhan, waxayna dejisay marxaladdii soo noqoshada AirVenture.
“Waxa laga yaabaa inay tani ahayd duruufihii ugu adkaa ee aan abid la kulanno urur ahaan si ay dhacdadu u dhacdo. Waxaan galnay sannadkan annaga oo aan garanayn sida ay u ekaan doonto AirVenture iyo sida ay u dhici karto dhacdo weyn. Bulshada duulista ayaa si weyn u hadashay, in kastoo - ay diyaar u ahayd inay timaado Oshkosh waanan ku faraxsanahay inaan soo dhaweynno. Mawduucayagu wuxuu ahaa 'Sugitaankii wuu dhammaaday,' runtiina way ahayd. Sugitaanku waa u qalantaa. Waxaa jiray farxad iyo reyn reyn dhammaan goobihii, waxayna u gogol xaartay soo noqoshada AirVenture, taasoo naga dhigtay mid aad ugu faraxsan mustaqbalka, ”ayuu yiri Maamulaha EAA iyo Guddoomiyaha, Jack Pelton.
Xoghayaha Joogtada ah, BMOTA, Reginald Saunders, oo ay dhinac fadhiyeen xubno ka tirsan kooxda BMOTA. LR: Deckrey Johnson, Aram Bethell, Nuvolari Chotoosingh, Reginald Saunders, Xoghayaha Joogtada, Greg Rolle, Jonathan Lord, Jon Tonko, Banyan Air; iyo Nathan Butler, Kastamka Bahamas. Lahaanshaha sawirka BMOTA.
Iyada oo ku saleysan tirakoobyada uu bixiyay Pelton, ilaa 608,000 oo qof, oo ka kala yimid 66 dal ayaa ka soo qeyb galay bandhiga sanadkan, lambarka saddexaad ee ugu sarreeya bandhigga taariikhda 68 -aad. Wadar ahaan 16,378 diyaaradood, oo ay ku jiraan 3,176 diyaarado show ah (diiwaanka 1,420 diyaarad gurracan ah ayaa diiwaangashan, 1,089 guri -dhisid, 354 dagaal -ooge, 148 diyaaradood oo aerobatic ah, 112 bad -mareen, 33 ultralights iyo 27 rotorcraft). Guud ahaan 567 xirfadlayaal warbaahineed ayaa ka soo qeybgalay munaasabadda waxaana la soo saaray in ka badan 18.95 milyan oo aragtiyo baraha bulshada ah.
Isagoo ku celcelinaya shucuurtii ay wadaageen Pelton, Rolle wuxuu yiri, “Dunidu wali waxay la halgameysaa ka soo bixitaanka masiibada Covid-19, marka xaqiiqdii ma fileynin xiisaha sare ee ka muuqda Bahamas. Midna maanu filaynin heerka la taaban karo ee guusha laga gaadhay bandhigga sannadkan, taas oo ay ka muuqatay tirada dadka soo booqday rugteenna oo ka soo qayb galay shirarka ganacsiga iyo siminaarada maalinlaha ah, iyo weliba natiijada dadaalladeenna isku xidhka. ”
Xiriirinta hay'adaha Iskaashiga Federaalka ee Caalamiga ah (IFP), oo Bahamas ay xubin ka tahay, ayaa ah wakiillada fulinta hawada ee Waaxda Kastamka iyo Ilaalinta Xuduudaha Mareykanka, LR: Nathan Butler, Kastamka Bahamas; Chris Doug, Kastamka Maraykanka & Ilaalinta Xuduudaha; Reginald Saunders, Xoghayaha Joogtada ah, BMOTA; John Cook, Kastamka Maraykanka & Ilaalinta Xuduudaha; Greg Rolle, Sr. Agaasimaha, Suuqa Verticals, BMOTA; Deckery Johnson, BMOTA iyo Aram Bethell, BMOTA. Lahaanshaha sawirka BMOTA.
“Shaki kuma jiro, waxaa jira xiiso weyn oo loo qabo Bahamas iyo dalab damacsan in la soo booqdo dalkeenna-ha ahaato booqdayaasha, duuliyeyaasha gaarka loo leeyahay ama hawl-wadeennada ganacsiga. Waxaan soo saarnay fursado ganacsi oo aad u tiro badan iyo hogaamiyayaal kooxeed oo u duulaya jasiiradeena, bandhigan, ”ayuu yiri Rolle.